အာရှတိုက်၏ မျိုးဆက်ပွားဆိုင်ရာ ဗဟိုချက်မမှ ကြိုဆိုပါသည်
လူသားများသည် လိင်ဆက်ဆံနိုင်စွမ်းဖြင့် ကောင်းချီးပေးထားသော်လည်း ကလေးတစ်ယောက် ရရှိရန်သည် ခက်ခဲနိုင်ပါပြီး ထိုပြဿနာများသည် မျှော်လင့်ချက်ကြီးမားသော စုံတွဲများအတွက် တစ်သက်သာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ခံစားရမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ လူသားများ၏ မျိုးပွားနိုင်မှုသည် အချိန်ကိုက်ဖြစ်မှု၊ အာဟာရနှင့် လူနေမှုပုံစံကဲ့သို့သော အကြောင်းအရင်းအမျိုးအစားကွဲ များစွာပေါ် မူတည်ပါသည် – ထို့ကြောင့် “ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ကလေးရနိုင်စွမ်းကို မထိခိုက်နိုင်ပါ” နှင့် “ ကျွန်တော် ကျန်းမာနေသမျှကာလပတ်လုံး အသက်အရွယ်သည် ပဓာနမဟုတ်ပါ” ဟူသော အချို့သော ယူဆချက်များသည် မှားယွင်းရသည့် အကြောင်းရင်း ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံးသည် မြုံနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ နှစ်ဦးလုံးအတွက် မြုံခြင်းကို ကုသသည့် နည်းလမ်းများရှိသောကြောင့် သင့်အနေဖြင့် စိတ်ချလက်ချ နေနိုင်ပါသည်။ သင်နှင့် သင့်အိမ်ထောင်ဖက်သည် စာအုပ်ကြီးအတိုင်းသွားပြီး ဖြစ်အောင် မလုပ်နိုင်သေးသော အခိုက်အတန့်များ ရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သောအခါတွင် ရှေးရိုးစဉ်လာ နည်းလမ်းများသည် နည်းလမ်းတစ်ရပ် မဟုတ်တော့ပါ – မြုံနေခြင်းကို ကုသခြင်းများဟုလည်း သိရသော – မျိုးဆက်ပွား ကုထုံးများသည် တစ်ခုတည်းသော အမှန်တကယ် အားထုတ်ပြီး မှန်ကန်သည့် ဖြေရှင်းနည်း ဖြစ်ပါသည်။ မလေးရှားသည် သားအိမ်ပြင်ပ မျိုးပွားခြင်း (IVF) ကုထုံးကို အောင်မြင်မှုနှုန်း ၅၅ မှ ၆၀ ရာနှုန်းအထိ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အမြုံကုထုံး များစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့် အာရှတိုက်၏ မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာ ဗဟိုချက်မဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မျိုးဆက်ပွား စင်တာများတွင် အသုံးပြုသော နည်းပညာများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများသည် အဆင့်မမြင့်ပါက ၎င်းသည် မည်သို့မှ ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
မျိုးဆက်ပွား ကုထုံးများမှ မည်သည့်အရာကို မျှော်လင့်သနည်း
ပြဿနာကို အဖြေရှာရန် သင်နှင့် သင့်အိမ်ထောင်ဖက်သည် ကျန်းမာရေးရာဇဝင် အသေးစိတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ မျိုးဆက်ပွား အထူးကုပေးရလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး ကာယစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကိုလည်း ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ မျိုးဆက်ပွားဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပြီး ၎င်းတို့သည် ဆီးစစ်ခြင်း၊ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ သွေးစစ်ခြင်း၊​ အသားစစစ်ဆေးခြင်း၊ ပုံရိပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အခြားအရာများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကုထုံးများကို အကြံမပြုမီတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ မျိုးဆက်ပွား အထူးကုများသည် မျိုးပွားဆေးများကို ညွှန်းဆိုလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး တိုးတက်မှု အနေအထားကို စစ်ဆေးကြည့်ပါလိမ့်မည်။ အခြေအနေသည် မတိုးတက်လာပါက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းဖြင့် ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းခြင်းသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်လာပါလိမ့်မည်။ သင်သည် မလေးရှား၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်ဆရာဝန်များ၏ အင်မတန် ကောင်းမွန်သည့် လက်ထဲတွင် ရောက်ရှိနေသောကြောင့် သင့်အနေဖြင့် စိတ်ချလက်ချ ရှိနေပါ။ ဤအဆင့်ကို ရောက်ပါက မျိုးဆက်ပွား ကုထုံးများသည် အချိန်ယူနိုင်သောကြောင့် သင်၏ မျှော်လင့်ချက်များကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ထားရန် အရေးကြီးပါသည်။ အဖြေများကို စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်တွင် သင်သည် မလေးရှားရှိ များစွာသော ထူးခြားဆန်းပြားသည့် ကျွန်းများသို့ ခေတ္တ အလည်အပတ် သွားရောက်နိုင်ပါသည်။ ထင်ရှားသည့် လူပေါင်းများစွာနှင့် အံ့ဖွယ်အစားအသောက်များသည် သင့်ကို စောင့်ဆိုင်းနေပါလိမ့်မည်။ မျိုးဆက်ပွား ကုထုံးများတွင် မလေးရှား၏ လက်တွေ့ အောင်မြင်မှု ကြည့်ရှုလျက် သင့်အနေဖြင့် သင်၏ အိပ်မက်များသည် အမှန်တကယ် ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ရန် အကြောင်းပြချက်တစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။
အကူအညီသုံး မျိုးပွားနည်းပညာ (ART) ဖြင့် မျိုးပွားမှုပြဿနာကို ဖြေရှင်းခြင်း
အကူအညီသုံး မျိုးပွားနည်းပညာ (ART) သည် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအတွက် မြုံခြင်းကို ကုသရန် ဒီဇိုင်းလုပ်ထားပါသည်။ ၎င်းသည် မျိုးဥနှင့် သုက်ပိုး နှစ်မျိုးလုံးကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သော မျိုးဆက်ပွားကုထုံးတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ကျော်ထားပါသည်။ အမျိုးသားများ သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးအတွက် မည်သည့် သီးခြား မျိုးဆက်ပွား ကုထုံးများဖြစ်ပါစေ ပရိုစီဂျာအများစုသည် အသုံးပြုသော ART ပရိုစီဂျာအပေါ် မူတည်၍ လိုအပ်သော အဆင့်များ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရသည့် မျိုးဥနှင့် သုက်ပိုးများကို ထုတ်ယူရန် ခွဲစိတ်နည်းလမ်းများ ပါဝင်ပါသည်။
မလေးရှားရှိ မျိုးဆက်ပွား ကုထုံးများ
အောက်ပါတို့သည် မလေးရှား၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်ဆရာဝန်များမှ အထူးကျွမ်းကျင်သော ART ပရိုစီဂျာများထဲမှ အချို့ ဖြစ်ပါသည် –
i. သားအိမ်ပြင်ပ မျိုးပွားခြင်း (IVF)
IVF သည် အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ် ပြင်ပတွင် မျိုးဥကို မျိုးစပ်ပေးသည့် ပရိုစီဂျာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ သားအိမ်ကို ဖြတ်လျက် မျိုးဥ ထုတ်ယူခြင်း (OVR) ကို မိန်းမကိုယ်၏ အနောက်ဖက်တွင် ရှိသော မျိုးဥကို ထုတ်ယူရန် အသုံးပြုပါသည်။ ထိုအချိန်အတွင်းတွင် သုက်ပိုးကို သုက်လွှတ်ခြင်းမှလည်းကောင်း အရေပြားကို ဖောက်ပြီး ဝှေးစေ့အညှာ သုက်ပိုင်း ထုတ်ယူခြင်း (PESA) နှင့် မိုက်ခရိုစကုတ်သုံး ဝှေးစေ့အညှာ သုက်ပိုး ထုတ်ယူခြင်း (MESA) စသည့် ခွဲစိတ်နည်းလမ်းများ မှတစ်ဆင့်တောင်မှလည်း လိုအပ်ပါက စုပ်ယူခြင်းမှလည်းကောင်း စုဆောင်းထားရပါမည်။​ မျိုးပွားဆေးများကို မျိုးဥအိမ်ထဲတွင် မျိုးဥ တစ်ဥတည်းသာလျှင် ကြီးထွားခြင်းအစား မျိုးဥများစွာ ကြီးထွားလာစေရန် လုပ်ဆောင်သော ဥအိမ် လှုံ့ဆော်ခြင်းအတွက် ညွှန်းပေးပါလိမ့်မည်။ ဆေးဖြင့် ဆောင်ရွက်မှုပြီးနောက်တွင် သန္ဓေသားကပ်တွယ်ရန်အတွက် သားအိမ်၏ အနားသားများကို ပြင်ဆင်ရာတွင် အမှန်တကယ် ကူညီပေးသော ဟိုမုန်း ပြောင်းလဲမှုများကို ခံစားရပါလိမ့်မည်။ သန္ဓေသား တွယ်ကပ်ခြင်းးအောင်မြင်ပါက သင်သည် ဘဝသက်သာ ပျော်ရွှင်မှု ရရှိမည်ဖြစ်သော အံ့ဖွယ် ၉ လအတွက် သင့်ကိုယ်သင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါသည်။
ii. မျိုးဥတွင်း သုတ်ပိုး ထိုးထည့်ခြင်း (ICSI)
ICSI သည် သားအိမ်ပြင်ပ မျိုးပွားနည်း ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် သုက်ပိုးအရေအတွက် နိမ့်သော အမျိုးသားများအတွက် ဒီဇိုင်းလုပ်ထားသော အမြုံကုထုံးတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ဤပရိုစီဂျာသည် မျိုးဥကို သန္ဓေအောင်စေရန် အလွန်သေးငယ်သည့် အပ်ကို သုံး၍ မျိုးဥ၏ အလယ်ဗဟိုထဲသို့ သုက်ပိုးတစ်ကောင်ကို ထိုးထည့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
iii. ပြင်ပ မျိုးစပ်ခြင်း မပြုမီ မျိုးရိုးဗီဇ ရောဂါ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း (PGD)
PGD သည် ART ပရိုစီဂျာ၏ အဖြည့်နည်းပညာတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် မျိုးရိုးဗီဇ ချွတ်ယွင်းချက်များဖြစ်နိုင်စွမ်းကို ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ရာတွင် အသုံးပြုသော သန္ဓေသားအကြောင်း ကောက်ကြောင်းဖော်သည့် ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီး မျိုးရိုးလိုက်သွားနိုင်သော အချို့ မျိုးရိုးဗီဇရောဂါများ သို့မဟုတ် မူမမှန်ခြင်းများကို ကြိုတင် ကူညီ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် တိကျနှုန်း အလွန်မြင့်သောကြောင့် လိင်ရွေးချယ်နည်းလမ်းတစ်ရပ်အဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
iv. ပြင်ပ မျိုးစပ်ခြင်း မပြုမီ မျိုးရိုးဗီဇ စစ်ဆေးခြင်း (PGS)
PGS သညလည်း ART ပရိုစီဂျာများ၏ အဖြည့်နည်းပညာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ခရိုမိုဇုန်း မူမမှန်ခြင်းအတွက် သန္ဓေသားများကို အကဲဖြတ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤလေ့လာချက် (၁) အရ ထပ်တလဲလဲ သားလျှောခြင်း၊​ အကြိမ်ကြိမ် သန္ဓေသားတွယ်ကပ်ရန် မအောင်မြင်ခြင်းနှင့် အခြား အမျိုးသားဆိုင်ရာ အကြောင်းများရှိသည် စုံတွဲများသည် ခရိုမိုဇုန်း မူမမှန် သန္ဓေသားများ ထုတ်ပေးခြင်းအတွက် ဗီဇတစ်ခုရှိသည်ဟုယူဆသည်။ PGS သည် IVF ပရိုစီဂျာများတွင် နောက်ပိုင်း အသုံးပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သော ခရိုမိုဇုန်းအားဖြင့် ပုံမှန် သန္ဓေသားများကို ကူညီ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးပါသည်။
သင်သည် သင့်ဘဝ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ စိန်ခေါ်မှု အမြင့်ဆုံး ကာလများထဲမှ တစ်ခုကို ဖြတ်သန်းနေရာသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ မျိုးဆက်ပွား ဆေးပညာ အံ့ဖွယ်ဆရာဝန်များသည် သင်သည့် စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ကြိုဆိုပြီး သင့်အား အိမ် အဝေးတစ်နေရာ ရောက်နေသော်လည်း အိမ်ကဲ့သို့ ခံစားရစေပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ပါ
မျိုးဆက်ပွား နေရာဌာနာများကို ရှာဖွေပါ